Talooyin ku saabsan safarka Riviera Maya | Wararka Safarka
Mariela Carril | 04/01/2022 17:00 | La cusbooneysiiyay 19/12/2021 13:48 | Talooyin, Mexico
Mid ka mid ah meelaha ugu dalxiiska badan Mexico waa Riviera Maya. Haddii aad jeceshahay qorraxda, badda iyo xeebta, tani waa mid ka mid ah meelaha loogu doonista badan yahay Ameerika, sidaas darteed maanta Actualidad Viajes waxaan ku siin doonaa macluumaad iyo Talooyin ku saabsan safarka Riviera Maya.
Iyada oo masiibada jirto aaggu wax badan ayaa soo gaaray laakiin in yar oo dalxiiska ayaa bilaabay inuu soo laabto, markaa qaado qoraalada safarkaaga xiga.
2 Talooyin ku saabsan safarka Riviera Maya
Waa oo ku taal xeebta badda Caribbean, ee gobolka Quintana Roo ee Mexico, qiyaastii 210 kiiloomitir guud ahaan, oo ku taal qaybta bari ee Jasiiradda Yucatán. Kaliya halkan waxaa ku yaal 405 huteelo oo noocyo kala duwan leh, iyadoo la bixinayo ku dhawaad ​​​​43.500 qol. Iyo haa, inta badan waxay bixisaa nidaamka loo dhan yahay, kaas oo ah mid aad waxtar u leh.
Aagga waxaa daboolay a kaynta kulaylaha ah engegan, xeebuhu waa ciid shacaab ah, biyo nadiif ah oo diiran, oo ka mid ah Kariibiyaanka, iyo sida dhulku u yahay dhagax nuurad godad badan baa jira dhulka hoostiisa ama godad, waayahaan dalxiis kale oo soo jiidasho leh.
Qodobbada ugu muhiimsan ee xiisaha Riviera Maya waa Puerto Morelos, qiyaastii 16 kiiloomitir u jirta garoonka diyaaradaha ee Cancun iyo 32 ka Cancun isku mid ah. Waa magaalo xeebeed, asal ahaan ka soo jeeda kalluumeysiga, jawi deganna leh.
Sidoo kale waa Playa del Carmen, magaalada ugu muhiimsan uguna weyn ee ku taal Riviera, oo leh hudheelo badan, dukaamo iyo makhaayado, Waxaa jira afar kilomitir oo meelo la lugeeyo iyo xeebaha waana meesha laga bilaabo booqashada. Cozumel. Meel kale waa Deked Adventures.
Puerto Aventuras waa dalxiis iyo horumarin deegaan oo leh hawo badeed, oo leh marinada ugu fiican jasiiradda, koorsada golfka iyo xeebo cajiib ah. Isaga raac Akumal, oo leh hudheelo yar laakiin leh harada quruxda badan ee Yalku ee loogu talagalay snorkeling, cenotes iyo xeebaha xeebaha. Halkan kama maqnaan kartid booqashada Aktun Chen, god qurux badan oo leh saddex qol, cenote u gaar ah iyo stalactites iyo stalagmites badan.
Tulum Waa kaadhka ugu qadiimiga ah. Aagga qadiimiga xeebta waa sawir qurux badan. Magaalada Mayan ee qadiimiga ah, maanta waxaa jira hoteelo iyo maqaayado, waxaa jira cobá burburay, oo qiyaastii 40 kiiloomitir u jirta, waxaa kaloo jira dhowr cenotes. Isagoo ka hadlaya Cobá, waa goob kale oo Mayan qadiimiga ah, oo 90 kiiloomitir u jirta Chichen Itza.
Waayo, dabeecadda jecel waxaa jira Sian Ka'an Biosphere Reserve, oo ku taal xeebta Kariibiyaanka, oo ah goob Dhaxal-gal ah tan iyo 1987kii.
Haddi aad baabuur ku guurayso waa inaad soo raacdaa shatiga darawalnimada caalamiga ah.Arrinkaygii waxaan mar walba ku farsameeyaa naadiga baabuurta ee dalkayga, waana xirfad sare, hadhow haddii aad ku shaqaynayso ciyaar gaar ah sida badmareenka iyo kuwa kaleba, waa inaad keentaa shahaadooyinkaaga. Caymiska caafimaadka sidoo kale, dabcan.
Marka la eego lacagta hadda jirta waa Peso Mexico laakiin badi goobaha dalxiiska si isku mid ah ayaa loo aqbalaa Doolarka Maraykanka iyo Yuuro. Kuwa ugu muhiimsan kaararka deynta Sidoo kale waa caadi (Visa, Mastercard, American Express), laakiin kuma jiraan dukaamada yaryar iyo dukaamada waddooyinka, sidaas darteed mar walba way ku habboon tahay inaad haysato xoogaa pesos ah oo gacanta ah, gaar ahaan marka aad dalxiis u baxdo.
Waxaa jira ATM-yo badan Cancun iyo Riviera Maya, laakiin ha ku kalsoonayn oo mar kasta oo aad ka baxdo hudheelka dalxiiska noocaan ah, qaado lacagtaada. Waxaad u baahan doontaa haddii aad rabto inaad iibsato biyo, muraayad qorraxdu, farshaxan aad jeceshahay ama tilmaan ka tag. Halkan Mexico waxa caadiga ah waa in laga tago 10 iyo 15% wadarta biilka ee baararka iyo makhaayadaha, laakiin way ku habboon tahay in la hubiyo sababtoo ah goobaha qaarkood ayaa horeba ugu daray. Haa, sidoo kale waa caado in la tilmaamo hagayaasha dalxiiska.
Goorma ayay tahay inaad aado Riviera Maya? Hagaag, waa kulayl iyo qoyan sanadka oo dhan, laakiin roobabku waxay da'aan inta u dhaxaysa May iyo Oktoobar iyo Juun ilaa Noofambar waa xilliga duufaanka. Xilliga qallaylku waa inta u dhaxaysa Noofembar iyo Abriil Heerkulka wanaagsan ee ku dhow 25ºC, inkasta oo bilaha Janaayo iyo Febraayo ay habeenadu qabow noqon karaan. Dabaylaha waqooyi waxa ay keeni karaan daruuro qaarna roobab bilaha Diisambar iyo Janaayo. Marka laga reebo ciidaha, taariikhahaan guud ahaan waxaa loo arkaa xilli hooseeya sidaas darteed waxaa jira qiimo wanaagsan iyo dad yar.
Dhanka kale, xilli-roobaadku waa inta u dhaxaysa May iyo Oktoobar roob iyo kulayl iyo qoyaan leh. Roobabku waxay noqon karaan kuwo aad u daran oo gaaban oo wax yar ka dib qorraxdu way soo baxdaa. Xilliga ugu sarreeya waa inta u dhaxaysa Juun iyo Ogosto ka dibna qiimuhu waa qaali oo waxaa jira dad badan. Si aad runta u sheegto, waxaa ugu xun xilliga duufaanta, laga bilaabo Juun ilaa Nofembar, laakiin gaar ahaan inta u dhaxaysa Ogosto iyo Oktoobar. Ma aha in ay jiraan duufaano sanad walba oo nidaamka cimiladu had iyo jeer ay ogaadaan waqtiga laakiin taxadarka lama qaado.
15 milyan oo dalxiisayaal ah ayaa booqda Riviera Maya iyo Cancun sanad walba, sidaas darteed waa meel nabdoon. Haa, waxaan sidoo kale arkay wararkii ugu dambeeyay ee ku saabsan toogashooyinka ka dhaca goobaha ganacsiga ... Nasiib darro ka ganacsiga maandooriyaha waa khatar waana inaan xisaabta ku darnaa taas laakiin waxay iila muuqataa in aysan wali sabab u ahayn in la joojiyo qaybtan Mexico liiska meelaha loo dalxiis tago. Marka la eego taxaddarrada kale, waa inaad qaadataa kuwa caadiga ah.
Iyadoo la tixgelinayo gaadiidka aagga waxaa jira wax walba, laga bilaabo basaska iyo tagaasida loo kiraysto baabuurta iyo adeegyada gaarka ah. Gaadiidka aad dooratay waxay ku xirnaan doontaa qorshahaaga. Haddii aad tamashle gasho waxa laga yaabaa inaad baabuur kiraysan karto ama aad iska qori karto safarro wareeg ah oo ay ku jiraan caawinta hagaha iyo tigidhada. Haddii aad dukaameysato, ka codso taksi hudheelka iyo voila. Haddii aad mid ku joojinayso waddada, hubi inuu haysto liisan oo hagaaji qiimaha safarka maadaama aysan jirin mitir.
Ma cabbi kartaa biyaha tuubada? Guud ahaan, maya Xitaa haddii aan ku idhaahdo haa, kuma habboona. Ma jiraa qof doonaya in uu fasaxiisa musqusha ku qaato calool xanuun? Had iyo jeer door bida biyaha dhalada ah.
Ugu dambeyntii, Xagee joogi kartaa? Way badan yihiin dhammaan hudheelada loo dhan yahay mar walbana waa ikhtiyaarka ugu fiican. Gaar ahaan haddii aad dhex marto aagga Cancun. Hadda, haddii aad booqanayso Riviera Maya iyo gaar ahaan Cozumel iyo Playa del Carmen waxaa jira hudheelo qurux badan sida Royal Hideaway Playacar ee dadka waaweyn oo keliya, ama Occidental ee Xcaret ama Allegro Playacar ee Playa del Carmen. The Kooxda Barcelona Waxay ku leedahay degaano badan qaybtan Mexico.
Maxaan ka maqnaan karin safarka Riviera Maya?
Booqo xarunta deegaanka ee Akumal
Snorkel ee Cenote Dos Ojos
Xel- Há Godad
Booqo Jasiiradda Holbox, oo laba saacadood u jirta Riviera Maya. Dhererkiisu waa 42 kiiloomitir, laakiin waxaa ka buuxa shimbiro kulaylaha ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » America » Mexico » Talooyin ku saabsan safarka Riviera Maya